Alcohol, Tobacco and Other Drugs - Somali
Waxaad la rabtaa ilmahaaga sida ama waxa ugu wacan. Xusuuso, wax kasta oo jirkaaga gela jirka canugaagana waa ay u gudbayaan. Dhibaato weyn ayaa la gaarsiin karaa marka canugu koriinshihiisu uu calooshaada gudaheeda ka bilaabanayo. Waa muhiim in la joojiyo cabbida aalkoladda, sigaarka iyo daroogooyinka kaleba marka ugu horeysa ee aad iskaga shakido in aad uureysatay.
Haddii aad sigaarka cabto, iska jooji. Cabbida sigaarku waxay sababi kartaa in ilmahaagu dhashaan mar hore iyagoo aad u yar. Ilmahaagu ma heli doono raashin ama hawo ku filan oo uu ku koro marka aad sigaarka cabto.
Ka dheerow dadka sigaarka caba waayo adiga iyo ilmahaaga uurka ku jiraaba dhib ayaad ka qaadi kartaan.
Ha cabin biir, khamri, ama cabbitaan kale oo aalkolo ay ku jirto. Aalkoladdu waxay u geysan kartaa dhib joogto ah ilmahaaga aan weli dhalan.
Ka dheereow dhamaan daawooyinka ilaa dhakhtarkaaga ama kalkaalisadaada caafimaadku ay kuu sheegayaan tan kugu haboon in aad qaadato.
Uurku ma ahan wax joogto ah, laakiin waxyeelooyinka uga imman kara ilmahaaga aalkoladda iyo daroogooyinku weligood ma dhamaadaan.
Daroogooyinka waddooyinka lagu gado aad ayey halis u yihiin. Haddii aad>ka raadso qof aad ku kalsoon tahay.
…Immika Waxaad Tahay Waalid
Waxaad tahay waalid la wadaaga guriga, kalgacalka, iyo wakhtigaba ilmo. Waalidka isticmaala daroogadda ama ku xad-gudba aalkoladda si quman uma xanaaneynayo ilmahiisa. Daroogooyinka, aalkoladda, iyo tubaakadu waxay kaa dheereyn karaan sidii aad u noqon lahayd waalidka wanaagsan ee aad awoodo in aad noqto waxayna ka reebi karaan ilmahaaga in ay ku koraan caafimaad qab iyo farxad.
Haddii aad sigaarka cabto, hawada gurigaaga ku jirtaa in ay dhib u geysanayso ilmahaaga. Carruurta in badan neeftaas qaadataa waxay noqdaan kuwo hargab fara badan iyo jirooyin kale ay ku dhacaan mana cunaan raashinka umana koraan sidii la rabay.
Way adagtahay in la noqdo waalid hagaagsan marka la sakhraansan yahay. Ilmuhu ma helayo kalgacalka, daryeelka iyo feejignaanta ay u baahan yihiin.
Ilmahaagu waxay doonayaan in ay noqdaan adiga oo kale. Haddii aad cabto aalkoladda, sigaarka ama aad daroogooyinka isticmaasho, ilmahaaguna waxay rabayaan in ay isku dayaan waxa aad sameyneysid.
Way kharash badan tahay in ilmo la koriyaa. Lacagta lagu bixiyo sigaarka, aalkoladda iyo daroogooyinka waa lacag loo isticmaali karay ku kharash gareynta raashin wanaagsan iyo madadaalada qoyska.
Waalidiinta oo dhami waxay doonayaan in ay ku raaxeystaan ilmahooda ayna arkaan iyagoo koraya. Aalkoladda, sigaarka iyo daroogooyinku waxay burburin karaan caafimaadkaaga waxayna gaabin karaan cimrigaaga.
Ha dalban in aad noqoto waalid qaba kansar, cudurada sambabka, wadne istaag ama AIDS.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad sidii aad iskaga joojin lahayd qaadashada daroogada ama cabbitaanka, fadlan na weydiiso kaalmadaas. Xafiiska WIC wuxuu kuu tilmaami doonaa meesha aad aadi karto si aad caawimaad u hesho.